खेलकुद मन्त्रीसँग क्रिकेटका कुरा :: भानुभक्त :: Setopati
खेलकुद मन्त्रीसँग क्रिकेटका कुरा
जगतबहादुर विश्वकर्माले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन नेपालले क्रिकेटमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पायो। खेलाडीले निकै मिहिनेत गरेर यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएको नेपाली क्रिकेटलाई नयाँ उचाइमा लैजान मन्त्री विश्वकर्मासँग केके योजना छन् भन्नेबारे सेतोपाटीका मनोज सत्याल र भानुभक्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाली क्रिकेटका यतिबेला तीन तस्वीर देखिन्छन्। एकातिर नेपालले ओडिआई मान्यता पाएको छ। अर्कातिर निजी क्षेत्रले धनगढीमा सर्वाधिक धनराशीको प्रतियोगिता आयोजना गरिरहेको छ। अनि कलाकार धुर्मुस-सुन्तली क्रिकेटको मैदान बनाउन कस्सिएका छन्। यी तीन कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ?
नेपाली खेलाडीहरूले जुन कठोर मिहिनेत र प्रतिष्पर्धी क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानमा प्रदर्शन गर्नुभयो त्यसले सबै नेपालीको इज्जत र प्रतिष्ठालाई माथि उठाएको छ। यो सबै खेलाडीको मिहिनत र समर्पणको प्रतीक हो।
मेरा लागि पनि यो खुसियालीको क्षण बन्यो। जुन दिन मैले पद बहाली गरें त्यही दिन हाम्रो देशले एकदिवसीय मान्यता पायो।
मैले पदभार ग्रहण गर्दा संकल्प गरेको छु- जुन खुसी प्राप्त भएको छ त्यसलाई सुक्न नदिने। नेपाली क्रिकेटमा जुन उत्साह आएको छ त्यसलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर लैजाने।
त्रिभुवन विमानस्थलमा खेलाडीलाई स्वागत गर्न जाँदा खेलप्रेमीले नारा लगाइरहेका थिए- क्यानको समस्या हल गर, मुलपानी मैदान छिटोभन्दा छिटो सुचारू गर। टुँडिखेलमा खेलेर विश्वकप पुगिन्न।
सुरूमा मैले त्यो नारा बुझिनँ। मलाई मुलपानी मैदानमा के भएको छ थाहा थिएन। विमानस्थलमै सचिव र सहसचिवलाई सोधेँ- विषय के हो?
त्यसपछि मैले त्यहीँ भनें- हामी क्यानको समस्या समाधान गर्छौं। मुलपानी मैदानको स्थलगत निरीक्षण गरेर छिट्टै समाधान निकाल्छौं।
अर्को कुरा धनगढी प्रिमियर लिग जारी छ। म आफैं त्यसको उदघाटनमा गएँ। निजी क्षेत्रबाट त्यति ठूलो आयोजना गर्ने काम जसरी भएको छ त्यो सकारात्मक छ।
मिडियाबाट कलाकार धुर्मुसले क्रिकेट मैदान बनाउने भनेको सुनेको छु। यसले पनि नेपालको क्रिकेटको सुखद् भविष्यको संकेत गरेको छ।
डिपिएलले क्रिकेटमा निजी क्षेत्रको आकर्षण भैराखेको छ। कलाकारले पनि जिम्मेवार नागरिकका हिसाबले पहलकदमी गरेका छन्। यी सकरात्मक कुरा हुन्। यसले सिंगो खेल क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपले तरंगित बनाएको छ।
ओडिआई मान्यता दिलाएर आएका खेलाडीलाई तपाईंले विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभयो। खेलाडीहरू भारतीय दूतावासले उपहार दिएको गाडी चढेर निस्किए। राष्ट्रिय गौरव बढाउने खेलाडीलाई सरकारले एउटा गाडी व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिएन। त्यो दृश्यले तपाईंलाई बिझ्यो कि बिझेन?
हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि परआश्रित छ। यसको पीडा हामी सबैलाई छ। धेरै भौतिक पूर्वाधारका लागि हामीले अरूको मुख ताकेका छौँ। यसरी हेर्दा छिमेकी मुलुकले दिएको बसमा हाम्रा खेलाडी चढ्नुलाई नकरात्मक टिप्पणी नगरौं।
सँगसँगै मेरो मनमा लागेको अर्को कुरा हो- हाम्रो स्रोत, साधन र क्षमताले ठूला कुरा पो गर्न नसकौँला। तर साना कुरा व्यवस्थापन गर्न त सक्छौं। देख्दा साना तर ठूला सन्देश जाने र नागरिकको आत्मगौरव बढाउने विषयमा हामीले ख्याल राख्नै पर्छ।
खेलाडी स्वागत गर्दा प्रयोग गरिएको साधनको विषयमा भएको व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई स्वीकार्छु। अबका दिनमा यस्तो हुन्न।
ओडिआई मान्यता पाएपछि सरकारले अब क्रिकेटमा गर्नुपर्ने पाँच काम समेटेर सेतोपाटीले श्रृंखला चलाएको थियो। त्यसमध्येको पहिलो काम खेलाडीको सेवासुविधा हो। राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीको मासिक तलब एक लाख रूपैयाँ बनाउनेबारे मन्त्रालयले के गरिरहेको छ?
खेलाडीका लागि उचित खेलको वातावरण निर्माणका खातिर राज्यले केही न केही सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
त्यसबारे हामीले सकारात्मक रूपमा सोचेका छौँ। सेतोपाटीले जुन अंक तोकेको छ त्यो राज्यको क्षमताले सम्भव हुन्छ कि हुन्न भन्ने हामी छलफल गरिरहेका छौ। एउटा कुरा ढुक्क हुनुस्-आउँदो वर्ष राष्ट्रिय खेलाडीले अहिले पाइरहेको सुविधामा केही न केही पक्कै केेही बढी पाउँछन्। सानै भए पनि नयाँ आरम्भ हुन्छ।
अर्को काम तत्काल नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) गठन हो। आइसिसीबाट निलम्बन फुकुवाका लागि मन्त्रालयले कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ? क्यानको निलम्बन फुक्न कति समय लाग्छ?
क्यानको साधारणसभा वैशाख पहिलो साता हुदैँछ। यही अधिवेशनले क्यानमा देखिएका सबै समस्याहरू हल हुने हाम्रो अपेक्षा छ। उहाँहरूले आइसिसीसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्ने आशा लिएका छौं। त्यसका लागि पनि समन्वय गरिरहेका छौं।
क्यानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएसँगै नेपाली क्रिकेटमा समस्याको सुरूवात भएको हो। फेरि तपाईंहरूले पनि क्रिकेटलाई कार्यकर्ता भर्ति गर्ने थलो बनाउने हो कि भन्ने शंका धेरैमा छ नि?
क्रिकेट र क्यानको मात्र कुरा होइन नेपाली खेलकुद क्षेत्र सही राजनीति नभएर बिग्रिएको हो। त्यहाँ राजनीति घुस्यो तर सही राजनीति भएन बरू कुप्रभाव बढ्यो। अब नेपालको खेलकुद क्षेत्र राजनीतिको कुप्रभावबाट निस्केर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छ। म यो विश्वास दिलाउँछु।
त्यसो भने सरकारले अब क्यानमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैन?
यसअघि खेल क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा गैरखेलकर्मी पुग्नुभयो। भोलिका दिनमा सम्बन्धित खेल विधाका खेलकुदकर्मीहरू नै खेल क्षेत्रको नेतृत्वमा पुगेको देख्नुहुन्छ।
त्यो भनेको तपाईंहरूले मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीका मान्छे लैजाने त होइन नि?
स्वभाविक रूपमा खेलसम्बन्धी संस्थामा आवद्ध रहेर खेल क्षेत्रमा लागेका सबैका प्रयत्न र प्रयासको स्वागत नै गर्नुपर्छ। त्यसलाई अर्को अर्थमा जोड्न मिल्दैन कि भन्ने लाग्छ।
नेपालले एकदिवसीय मान्यता पाएपछि आइसिसीले दिने सहयोगमा बढोत्तरी हुदैँछ। तर क्यानमा व्यावसायिकभन्दा राजनीतिक नेतृत्व आएर कतै बजेटको दुरुपयोग हुने पो हो कि भन्ने धेरैको आशंका छ?
विगतलाई हेर्दा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट अरू मन्त्रालयको तुलनामा निकै कम र सिंगो बजेटको एक प्रतिशत पनि छैन। अब यो परिस्थितिबाट हामीले छुटकारा दिनैपर्छ। आगामी बजेटमा मन्त्रालयको बजेटको आकारमा वृद्धि हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट जे-जति सुविधा र बजेट प्राप्त हुन्छ त्यो सम्बन्धित खेलाडी, प्रशिक्षण र प्रशिक्षकमा परिचालन हुन्छ। विगतमा स्रोतको सही परिचालन नभएको सुन्नमा आएको छ। अब स्रोत साधनको सही परिचालन हुन्छ।
हामीलाई चाहिएको अर्को कुरा मैदान हो। मुलपानी मैदान कहिले बनिसक्छ? देशभरि नयाँ मैदान बनाउने योजना के छ?
खेल मैदानबेगर खेलकुद विकास गर्न सक्दैनौं भन्ने हामीले बुझेका छौं।
काठमाडौं उपत्यकामा अर्को अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न स्टेडियम बनाउन यो वर्ष नै डिपिआर तयार गर्ने गरी अगाडि बढ्छौं। दशरथ रंगशालाको पुर्ननिर्माण चलिराखेकै छ।
त्यस्तै प्रदेशलाई केन्द्रीत गरेर आधुनिक रंगशाला बनाउने योजना छ। स्थानीय सरकारका वडा तहसम्म आवश्यकता र सम्भावना हेरेर रंगशाला बनाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेछौँ।
मुलपानी मैदानका लागि यो वर्ष थप बजेट छुट्याउँछौं। छिट्टै जग्गाको समस्या समाधान हुन्छ। त्यसबारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेका छौं। आगामी वर्ष बजेटको आकार वृद्धि ग राएर दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्छौं।
कीर्तिपुर मैदानको पनि स्तरोन्नतिको काम सुरू गर्नेछौँ।
धनगढीको फाप्ला र पोखरामा पनि मैदान बनाउन यही वर्ष बजेट छुट्याउने छौं।
भैरहवामा रंगशाला बनाउने काम जारी छ। आउने वर्ष हुने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि नेपालगञ्जमा भौतिक पूर्वाधार पनि बनाउँदैछौं। आउने वर्ष नै हुने दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि पनि राम्रा पूर्वाधार बनाउन लागेका छौं।
नेपाली क्रिकेटले यथेष्ट मात्रामा कर्पोरेट क्षेत्रको लगानी ल्याउने क्षमता राख्छ। निजी क्षेत्रले मैदान बनाउन प्रस्ताव गर्दा पनि सरकार उदासिन बनेको आरोप छ। कर्पोरेट क्षेत्रलाई क्रिकेटमा भित्र्याउन के गर्नुहुन्छ?
हामीले खेलकुद ऐन अब संघीय संरचनाअनुसार बनाउँदैछौं। नयाँ ऐनको मस्यौदा भैराखेको छ। नयाँ ऐनमा राज्यले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी पनि खेलाडी र राष्ट्रको हित केन्द्रमा राखेर परिचालित हुने व्यवस्था गरिनेछ। जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई क्रिकेटमा जोडिन अहिलेभन्दा सहज हुनेछ।
क्रिकेटको विकासमा कुटनीतिको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई हामीभन्दा माथिल्ला स्तरका देशसँग खेलाउन सरकारले कसरी भूमिका खेल्छ?
खेलको बहुआयामिक महत्व छ। भर्खरै मात्र दुई कोरियाबीचको सम्बन्ध बढाउन खेलले कति धेरै भूमिका खेल्यो। कोरियन द्वीपमा मात्र नभएर विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा महत्व दर्शायो। हाम्रा छिमेकी देश र संसारका मित्रराष्ट्रसँग सुमुधर सम्बन्ध बढाउन खेल क्षेत्र बलियो आधार हुनसक्छ।
त्यही सम्बन्धलाई हामी क्रिकेटको विकासमा प्रयोग गर्न सक्छौं। खेलका लागि नेपाल 'न्युट्रल' भूमि बन्न सक्छ। भारत र पाकिस्तानको चिसो सम्बन्धलाई सुधार गर्न नेपालको भूमि र मैदान प्रयोग हुन सक्छ। मुलपानी मैदान यसका लागि उपयुक्त मैदान बन्न सक्छ।
नेपाल हाइ अल्टिच्युडमा हुने खेलहरूका लागि पनि उपयुक्त भूमि बन्न सक्छ। एड्भेन्चर खेलका उपयुक्त ठाउँ पनि नेपालमा छन्। हामी कुटनीतिमार्फत् खेल पर्यटनमा नयाँ आयाम दिने प्रयास गर्नेछौं।
यहाँले सबै कुरा सहजै हुन्छ भन्नुभयो तर क्रिकेटको विकासमा देखिएका चुनौती के हुन्?
पहिलो त हाम्रो संस्कार र संस्कृति हो। खेल क्षेत्रको महत्वलाई हामीले आत्मसात् गरेका छैनौं। अर्को कुरा हामीमा प्रतिवद्धता र संकल्पको अभाव छ। तेस्रो कुरा खेल क्षेत्रमा हुनुपर्ने अभ्यास र चिन्तन भएन। व्यक्तिगत स्वार्थ र एकछिनको लाभ हेरेर अभ्यास गर्‍यौँ। त्यसले विकृति जन्मायो। चौथो ,स्रोत साधन राज्यले जसरी परिचालन गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेन। प्रारम्भिक बुझाइमा मैले यी कुराहरू नै चुनौती देखेको छु।
अन्त्यमा, सरकारी उदासिनताले कतै चार वर्षपछि एकदिवसिय मान्यता खोसिने हो कि भन्ने धेरेको शंका छ, खेलकुद मन्त्रीका हैसियतले चार वर्षपछि नेपाली क्रिकेट कुन अवस्थामा पुग्छ भन्ने लाग्छ?
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदकलाई लक्षित गरेर हामीले योजना बनाउछौं। नेपालमा उपाधिको सम्भावनासहित क्रिकेट उदय भएको छ। क्रिकेट सम्भावना बोकेको खेले हो भन्ने कुरा एकदिवसीय मान्यताले बताइसकेको छ। त्यस हिसाबले यसमा राज्यको लगानी वृद्धि हुन्छ।
चार वर्षमा एकदिवसीयबाट झर्ने होइन टेस्ट मान्यता पाउने राष्ट्रिय लक्ष्य बनाएर अब काम गर्छौं।
यी पनि हेर्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २१, २०७४, ११:४८:३१